Umlotha ka-Angela nguFrank McCourt | Uncwadi lwangoku
UAlberto Legs | | I-Biography, iintlobo, Iincwadi, Iincwadi, Inoveli
Xa kuziwa ekuqondeni imvelaphi yemicimbi enje ngentlupheko, ukufudukela kwelinye ilizwe okanye umnqweno wokuphucula, uncwadi luba yeyona ndawo yokusabela. Nangona ukuba simba nzulu kancinci, siya kufumanisa incwadi emiselwe ukuba ibe yeklasikhi yangoku. Ibhalwe ngu UFrank McCourt kwaye yapapashwa ngo-1996, Umlotha ka-Angela ayisiyiyo enye kuphela ezona ncwadi zilungileyo zenkulungwane yamashumi amabini, kodwa elona tikiti lihle lokuya eIreland ligcwele amaphupha nezithembiso ezingazalisekiswanga.
1 Isishwankathelo somlotha ka-Angela
2 UAngela's Uthuthu lweeMpawu
3 Umlotha ka-Angela: X-ray yexesha
Isishwankathelo somlotha ka-Angela
Banokuba ngamahlwempu, izihlangu zabo zinokuba sematheni, kodwa iingqondo zabo zingamabhotwe.
Ngokusekwe kubomi bombhali ngokwakhe, uFrank McCourt, U-Angela's Ashes usisa kwindawo yaseNew York eBrooklyn apho umbhali achithe ubuntwana bakhe kwii-30s zokuqala. Unyana kaMalachy noAngela McCourt, uFrank wayengoyena mdala kubantakwabo abahlanu: uMalachy Jr., amawele u-Oliver no-Eugene kunye noMargaret omncinci abathi emva kokusweleka kwiintsuku ezimbalwa ubudala banyanzela usapho ukuba lubuyele eIreland yabo. Apho, amawele amabini nawo ayafa kwaye uMichael noAlphie bazalwa.
Uqweqwe luka-Angela's Ashes luba yeyona nto ilungileyo yokuntywilisela umfundi kwi-grey Ireland. Ngokukodwa kwi Isixeko saseLimerick esasibhuqwa bubuhlwempu ngexesha le-30 kunye ne-40, imvula eyenze yonke into yadakumba ngakumbi kunye neminqweno enzima kakhulu ukuyizalisekisa, ngakumbi xa utata wakho echitha yonke imali emsebenzini wakhe wokuqala kwiipintshi kwaye umama wakho elahlwa ngababingeleli abahlela ukutya kwakhe okushiyekileyo phakathi kwabamelwane.
Imeko ejikeleze uFrank, umfana osakhulayo kwindlu encinci, eshukunyiswa livumba lomchamo, ukuvuza kunye neebug bug, uyakwazi ukuguquka ngaphandle kokugula kunye nokuxhalaba, uleqa iphupha lokubuyela eNew York ukuze ube umbhali.
UAngela's Uthuthu lweeMpawu
Abalinganiswa abaphambili kulo mdlalo, ngokusekwe kubomi bombhali, ngabo bangabosapho lakwaMcCourt. Kwelinye icala, abanye abahlali baseLimerick nabo bathatha ukubaluleka okukhulu kuwo wonke umsebenzi:
UFrank McCourtUmkhuseli webali, umbhali we Uthuthu luka-Angelas usibhaptiza ngeenkumbulo zakhe kuloo Ireland imnyama izele ngamaphupha aqhekekileyo. Umlinganiswa othi nangona ejamelene nobunzima aqhubeke nephupha lokubaleka uLimerick emisela umzekelo kusapho olonakeleyo kukuziphatha kukatata ongenankathalo othe, ubuncinci, wazi indlela yokumxelela amabali amnandi.
UAngelaUmama kaFrank ulungile, kodwa ubuthathaka kakhulu. Ngokuzithemba okuphantsi, u-Angela uyaliwa yintsapho yakhe, ebalekela kumyeni ongaziyo ukuba angamxabisa njani, ngemfesane yababingeleli kwanokuhenyuza. Nangona isihloko sale noveli yokuqala sibhekisa kwisiqendu esenzeka kwinxalenye yesibini yebali, kunjalo, uninzi lukhomba kwisihloko se-Ashes's Ashes njengereferensi yecuba elisetyenziswe nguNksk. McCourt ngelixa elinde umyeni wakhe ukuba abuye ngemali okanye nokufa kwabantwana babo abathathu.
Malaki: Utywala kwaye unoxanduva lwawo onke amashwa e-McCourts, usolusapho akakwazi nje ukugcina umsebenzi ozinzileyo, kodwa yonke idenari ayifumanayo ichithwa etywaleni kwimivalo yeLimerick. Unentliziyo entle, kodwa ebuthathaka kakhulu, wondla unyana wakhe ngengcinga ngokumxelela amabali ukuba anyamalale embalini, abalekele eNgilane.
Malachy jr: Unyana wesibini weMcCourts ngomnye wabancedisi abakhulu bomntakwabo uFrank. Uba ngumlingane wakhe ophambili xa kufikwa ekukhuliseni usapho ukuze aphele njengejoni njengendlela yokubaleka ubuhlwempu.
Ukongeza kwaba baphambili, kukho abalinganiswa abahlulwe baba ngamaqela amathathu aphambili:
UFrank noMalachy Jr abantakwabo: Ngokukodwa uMichael noAlphie, abasinda kwiminyaka yokuqala yendlala.
Usapho lukaAngela: Abazala bakhe uDelia noPhylomena, udadewabo u-Anggie, onceda uFrank ukuba akhe ikamva, umyeni wakhe uPa Keating, indoda enemibala emema uFrank ukuba aye kwipinti yakhe yokuqala, umama wakhe noLaman, umalume u-Angela uxhasa isondo ngokutya.
Abahlobo bakaFrank: Paddy, Miky, Terry, Freddye noBilly noTheresa. Ukongeza, kufanelekile ukukhankanya u-Theresa Carmody, umfazi oselula oqala uFrank ukuba abelane ngesondo, nangona bengenalo ixesha lokuqalisa ibali lothando emva kokubhubha kukaTheresa ngenxa ye-typhus.
Umlotha ka-Angela: X-ray yexesha
Iinkcukacha ezithile zebali ziyadizwa.
Umlotha ka-Angela kunye nebali alibalisayo lisebenza njengomzekelo. Ukubonisa ukuba akukho nto ingenakwenzeka, ngakumbi xa umfana osuka kusapho oluhlwempuzekileyo lwaseIreland efumana imali eyaneleyo yokuya eNew York eneminyaka eyi-19.
Le meko, ingumxholo we-Ashes's Ashes, iyaqhubeka kwinoveli ethi, yapapashwa ngo-1999 nalapho uMcCourt exelela ukuba waba ngumbhali njani. Kwesi sihloko kufuneka sidibanise Utitshala, yapapashwa ngo-1999 nalapho amava akhe okuba ngumfundisi-ntsapho atyhilwa, kwaye UAngela kunye noMntwana uYesu, ekhutshwe ngo-2007 kwaye iphefumlelwe ibali ukusuka ebuntwaneni bukamama.
Umbhali uFrank McCourt.
Ophumelele amabhaso ePulitzer ngo-1997, Uthuthu luka-Angela luya kuba Ukulungiswa kwi-cinema ngo-1999 ngumlawuli u-Alan Parker kunye no-Robert Carlyle kunye no-Emily Watson kwiindima ezahlukeneyo zikaMalachy no-Angela, beza nempumelelo ebalulekileyo kunye noluntu.
Inoveli etyhola umzuzu othile kwimbali yakutshanje ukusixelela ukuba akukho nto ingenakwenzeka. Amaphupha anokuhlala efezekiseka.
Kungenxa yokuba nangona izihlangu zikwimeko emaxongo, iingqondo zinokubamba amabhotwe.
Ukhe wafunda Umlotha ka-Angela NguFrank McCourt?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Uthuthu luka-Angela nguFrank McCourt
I-Literania kunye noMboniso weNcwadi. Ukuqeshwa koncwadi olubalulekileyo eMadrid
Kutheni le nto ababhali besebenzisa isiteketiso?